ဆယ်တန်းအောင်ချက်တွေကောင်းတာသိပြီးပြီလား……မသိသေးရင်လည်းအခုသိအောင်ဖက်လိုက်တော့နော် … ဆယ်တန်းအောင်ချက်တွေကောင်းတာသိပြီးပြီလား …? မသိသေးရင်လည်းအခုသိအောင်ဖက်လိုက်တော့နော် အောင်စာရင်းလည်းထွက်တော့မှာဆိုတော့ ဘုရားတရားလည်းမမေ့နဲ့ဦးနော် 2018-2019 နှစ်အောင်ချက်ကတော့ 60%လောက်ရှိတယ်လို့သိထားပါတယ် moderation တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခန့်မှန်းခြေ 38 မှတ်လောက်အထိပေးထားပါတယ် Myanmar moderation မရှိပါဘူးနော် English 38 Math 38 Chemistry 39 Physics 37 Eco/Bio 39 လို့တော့သိထားပါတယ်.ခန့်မှန်းခြေပါ ဆယ်တန်းဖြေထားတဲ့ညီ/ညီမလေးတို့ …
ပျံလွန်တော်မူတာ ၁၄ ရက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော်ဟာ ပုပ်ပွ ပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့အတွက် မီးသင်္ဂြိုဟ်ပူဇော်မယ့် အဖွဲ့နဲ့ ကျောင်းမှာ ဒီအတိုင်းထား ပူဇော်မယ့်အဖွဲ့တို့ နှစ်ဖွဲ့ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ပဲခူးမြို့အောင် သုခဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်က သက်တော် (၉၆) နှစ်၊ ၀ါတော် ၄၃ ၀ါဖြစ်တဲ့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာကြီးရဲ့ အဓိပတိ မဟာနာယက ဆရာတော်ဘုရားကြီး …
မိမိ၏ တပတ်စာ ကံကြမ္မာကို သိရှိနိုင် ဖို့အတွက် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ဗေဒင်ကို ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်. ဗေဒင် ဟောကိန်းတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ များသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဗေဒင်ပညာရပ် အတိုင်း တွက်ချက် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် မင်းသိင်္ခ ဗေဒင်တွင် ၇ ရက် သားသမီး အတွက် နှစ်အလိုက် …
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို သုံးပြီး မျက်နှာချေးချွတ် ၊ ပေါင်းတင်နည်း
ရှားစောင်းလက်ပတ် နှင့် မျက်နှာ ချေးချွတ် ပေါင်တင်နည်းလေးပါ (၁) ရှားစောင်းလက်ပတ် အလယ်သားကို ခြစ်ချ ထားပြီး အနည်းငယ် ချန်ထား ပါ (၂) ဆနွင်း မှုန့် (သို့) ကော်ဖီမှုန့် အနည်းငယ် (ပုံပါ အတိုင်း) တင်ပြီး ကျန် အသား အနည်းငယ်ကို ခြစ်ပြီး ရောသမ လိုက်ရပါမယ် (၃) …
ထားဝယ်တွင် ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုပေါက်နေသော်လည်း ထီပေါက်သူအား မသိရသေး
ထားဝယ်တွင် ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုပေါက်နေသော်လည်း ထီပေါက်သူအား မသိရသေး ထားဝယ်မြို့ရှိ DELUXE III(ထားဝယ်) ပင်ရင်း ထီဆိုင်တွင် ၃ ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များအနက်လက်မှတ်တစ်စောင်မှ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုပေါက်နေသော်လည်း ကံထူးရှင်ကို မေ ၈ ရက်အထိ မသိရသေးကြောင်း ယင်းထီဆိုင်ထံမှ သိရသည်။ ထီလက်မှတ် နံပါ ဗ ၆၂၆၂၈၆ သည်မိုးယံထီပင်ရင်းရုံးတွင်ဝယ်ယူချိန်က ပါဝင်သော်လည်း DELUXE III(ထားဝယ်ပင်ရင်း) ထီဆိုင်တွင် တစ်ဦးချင်းလာရောက်ဝယ်ယူထားသည့် …
မြန်မာ အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ ဒေါသကို ယမ်းပုံမီးကျ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဒေါင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တပုံ
မြန်မာ အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ ဒေါသကို ယမ်းပုံမီးကျ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဒေါင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တပုံ ဒေါင်းဟာ မကြာခင်နှစ် အနည်းငယ်က စပြီး နာမည်ကြီးလာ ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အနုပညာ သက်တမ်း သိပ်မကြာသေး ပေမယ့် အနုပညာ မှော် အောင်ထားသလား ထင်ရအောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ် လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မှတ်ချက်ပေးခြင်း ခံရတဲ့ …
လူမဲပဲဖြစ်ဖြစ် လူဖြူပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာရှိတဲ့သူမို့ ရွေးချယ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ သင်ဇာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပုရိသတွေ တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ တသသ ခေါ်ဆိုရ လောက်အောင် အလှသတင်းကြီးတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ လက်ရှိမှာ ဆက်စီ Model နဲ့ မင်းသမီး တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို မထပ်အောင် ဝတ်ဆင် နိုင်သလို အမြဲတမ်း …
မြင်ရ သိရတာ စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ ကလေးလေးရယ်..။ ကိုယ်တွေတောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် မိဘနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ ဘယ်လောက်အထိတောင် ရင်ကျိုးလိုက်ရမလဲဆိုတာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲ ဖေ့ပေါ်မှာ အကောင့်တစ်ခုကနေတင်ထားတာ တွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ကလေးမိဘများ သတိထားစေချင်လို့ပါ ခွေးမွေးတဲ့တဲ့သူများကလည်း မိမိ သနားတတ်လို့ ကျွေးမွေးထားတဲ့ ခွေးများကို မိမိကိုယ်တိုင် ထိမ်းကျောင်းနိုင်မှ ကျွေးမွေးထားစေချင်ပါတယ် မဟုတ်ရင် မိမိရဲ့ကုသိုလ်က သူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာရင် အကုသိုလ့်ဖြစ်တတ်လို့ပါနော်..။ …
ဖခင်နှင့်တူသော ချစ်သူဆိုတာ…ဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူပါ….
ဖခင်နှင့်တူသော ချစ်သူ ဖခင်နှင့်တူသော ချစ်သူကိုရလျှင်… ဘဝသည် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ၁ – အကောင်းအဆိုးနှစ်တန် ဆုံးမပဲ့ပြင်ပေးခြင်း ၂ – တိုက်ခိုက် စော်ကားမှုများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း ၃ – လိုအပ်သည်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ၄ – အနွံတာခံ ချစ်ခင်ယုယခြင်း ၅ – မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ကျသည့်မျက်ရည်ကိုမဆိုခမ်းခြောက်စေခြင်း ၆ …
ဆရာဝန်ကြီးများနှင့်စမ်းသပ်ကြည့်ရာ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်ရှိရုပ်ကလာပ်မှာ ထူးခြားနေသောကြောင့် မီးမသဂြိုဟ်ဘဲ ထာဝရကိုးကွယ်မည်
ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနမပြုဘဲ ထာဝရပူဇော်ထားရှိမည် ပဲခူးမြို့၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီးဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိဈာပန မီးသဂြိုဟ်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ဘဲ ရုပ်တော်အတိုင်း ထာဝရပူဇော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဈာပနတော် ကျင်းပရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ဧပြီ ၂၇ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ အာရှတော် …